प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीकै मुखबाट निस्किएको हो– मनी, मसल र म्यानपावरको दुरुपयोग बढ्यो । मनी मसल र म्यानपावरको दुरुपयोग बढेको हो भने ती विषयहरुमा परेका मुद्दामा अदालतले सख्ती र सक्रियताका साथ फैसला गर्ने काम गरेको छ छैन, फैसला कार्यान्वयन गरिएको छ त ?
प्रधानन्यायाधीशका अनुसार देशमा आफुलाई बलियो बनाउन ‘मनि, मसल र म्यानपावर’को दुरुपयोग बढेको छ । उनले यो कुरा गत शुक्रबार काठमाडौंको मनमैजुमा पुन:स्थापकीय स्रोत केन्द्रको उद्घाटन भाषणमा बताएका हुन् । ‘यहाँ विधिको शासन कमजोर बनाउने खेती चलिरहेको छ, ‘बनमारा’ मौलाउन खोज्दै छ हामी होसियार हुनुपर्छ ।’ यसको अर्थ कानुनी राजका लागि होसियारी गर्ने प्रधानन्यायाधीशको कुरामा सबै होसियार बनेका छन् कि छैनन् ?
प्रधानन्यायाधीशले शसस्त्र द्वन्दको अन्त्यपछि पनि द्वन्दको खेती गर्नेहरु र ‘हुंकार दिनेहरुको जमात’ बढेको, कसरी मिठो बोल्न सकिन्छ भनेर त्यस्ता गलत रवैयाका मान्छेहरुलाई पनि पुन: स्थापकीय न्याय सिकाउन जरुरी छ । उनले अपराध घटिसकेपछि कसरी सजाय गर्ने भन्ने बारेको नयाँसंहिता आउन लागेको खुलासा पनि गरे । गुण्डागर्दी बढेको स्वीकार्ने तर गुण्डागर्दी न्यूनिकरण गरेर सभ्य समाज सिर्जना गर्नतिर न्यायाधीशहरु समाज मैत्री बनेका छन् कि छेनन् भन्नेतिर पनि आँकलन गर्नुपर्ने हो । किनभने कूशासन बढेको र अनियमितता फस्टाएको भन्दै संवैधानिक अंगहरुले गरेका दावीमा अदालतले हराइदिने र समाजले भ्रष्ट, अनैतिक, गुण्डा भनेर नरुचाएका व्यक्तिहरु अदालतबाट छुट्ने गरेका छन् । समाजले जे प्रेडिक्शन गर्छ, त्यसविपरित फैसला आउँदा र न्यायाधीशहरु नै बिबादमा मुछिदा न्यायालयप्रति जनआस्था घटेको छ ।
न्यायालयको सम्मान पहिले न्यायालयको स्वच्छताबाट बढाउनु जरुरी छ ।